Noocyo Rakib ah Noocyo badan oo Forklift ah Qalabka Qalabka Bacda iyo Warshad | YiZheng
Waa maxay Qalabka Beerista Noocyada Forklift?
Nooc Forklift ah Qalabka Bacriminta waa afar-in-mid-multi-functional mashiinka leexinta in ururiyaa leexashada, dejinta, burburin iyo isku darka. Waxaa lagu shaqeyn karaa hawada furan iyo aqoon isweydaarsiga sidoo kale.
Muxuu sameyn karaa Qalabka Farsamaynta Nooca Forklift?
Nooca Forklift Mashiinka Sameynta Compost waa sheyga shatiga ee shirkadeena. Waxay ku habboon tahay halsano leh qiyaas yar oo ah digada xoolaha, dhoobada iyo qashinka, dhoobada shaandhada laga soo saaro dhalada sonkorta, keega ka sii darma ee ka sii xun iyo balka cawska iyo qashinka kale ee dabiiciga ah.
Marka loo barbardhigo qalabka leexinta dhaqanka.
Codsiga Qalabka Isugeynta Nooca Forklift
Ku Nooca Forklift Mashiinka Sameynta Compost waxaa si aad ah loogu isticmaalaa warshad bacriminta dabiici ah, warshad bacriminta isku dhafka ah, dhoobada iyo warshadda qashinka, beerta qudaarta iyo dhirta bisporus si ay halsano u noqoto ugana saarto biyaha.
Nooca Forklift Isugeynta Qalabka Muuqaalka Muuqaalka
Xulashada Nooca Forklift Qalabka Isugeynta Nukliyeerka
Bixi xuduudaha ku habboon iyadoo loo eegayo baahida gaarka ah ee macaamiisha.
Hore: Taangiga Gawaarida Gaaban
Xiga: Mashiinka Gawaarida Isku-darka Isukeenista